उडान ढिलाइ भएको क्षतिको लागि क्षतिपूर्ति Law & More B.V.
ब्लग » उडान ढिलाइ क्षतिको लागि क्षतिपूर्ति
उडान ढिलाइ क्षतिको लागि क्षतिपूर्ति
२०० Since देखि, ढिलाइ भएको उडानको घटनामा, तपाईं यात्रुको रूपमा अब खाली हातको खडा हुनुहुन्न। वास्तवमा, स्टर्जेनको फैसलामा युरोपियन युनियनको न्याय अदालतले क्षतिपूर्ति भुक्तान गर्ने एयरलाइन्सको दायित्व बढायो। त्यसबेलादेखि यात्रुहरूले क्षतिपूर्तिबाट फाइदा लिन सकेका छन् केवल रद्द हुने घटनामा मात्र होइन तर उडान ढिलाइ भएको खण्डमा पनि। अदालतले यो निर्णय गरेको छ कि दुबै केसमा एयरलाइन्ससँग मात्र एक छ तीन घण्टाको मार्जिन मूल तालिकाबाट विचलित गर्न। के प्रश्नमा मार्जिन एयरलाइनले पार गर्यो र तपाईं आफ्नो गन्तव्यमा तीन घण्टा भन्दा ढिलो ढिलो पुग्नुहुन्छ? त्यस्तो अवस्थामा, एयरलाइन्सले तपाईंलाई ढिलाइ भएको क्षतिको लागि क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ।
जहाँसम्म, यदि एयरलाइनले प्रमाणित गर्न सक्दछ कि यो प्रश्नको ढिलाइका लागि जिम्मेवार छैन, यसैले अस्तित्व प्रमाणित गर्दछ असाधारण अवस्था जसलाई वेवास्ता गर्न सकिन्न, यो तीन घण्टा भन्दा बढी ढिलाइको लागि क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य छैन। कानुनी अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै, परिस्थितिहरू विरलै असाधारण छन्। यो मात्र मामलामा हुन्छ जब यो आउँदछ:
धेरै खराब मौसम अवस्था (जस्तै आँधी वा अचानक ज्वालामुखी विस्फोट)
अघोषित स्ट्राइकहरू (उदाहरण: एयरपोर्ट स्टाफ द्वारा)
न्यायाधीश अदालतले विमानमा टेक्निकल कमजोरीहरूलाई त्यस्तो परिस्थिति मान्दैन जुन असाधारणको रूपमा लिन सकिन्छ। डच अदालतका अनुसार, एयरलाइन्सको आफ्नै कर्मचारीले गरेको हड्तालहरू पनि त्यस्तो परिस्थितिमा आउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा, तपाइँ एक यात्रीको रूपमा केवल क्षतिपूर्तिको हकदार हुनुहुन्छ।
के तपाईं क्षतिपूर्तिको हकदार हुनुहुन्छ र त्यहाँ कुनै अपवाद अवस्था छैन?
त्यो अवस्थामा, एयरलाइनले तपाइँलाई क्षतिपूर्ति तिर्नै पर्छ। तसर्थ, तपाईंले अर्को सम्भाव्य वैकल्पिकसँग सहमत हुनुपर्दैन, जस्तै भौचर, जुन एयरलाइनले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछ। केही परिस्थितिहरूमा, जे होस्, तपाईं हेरचाह र / वा आवासको हकदार पनि हुनुहुन्छ र एयरलाइनले यसलाई सुविधा पुर्‍याउनुपर्दछ।
क्षतिपूर्ति को रकम सामान्यतया १२ 125 देखि 600०० सम्म - युरो प्रति यात्री, उडानको लम्बाई र ढिलाइको लम्बाइमा निर्भर हुन सक्छ। १ flights०० किमी भन्दा छोटो उडानको ढिलाइका लागि तपाईं २ 1500० गणना गर्न सक्नुहुन्छ - युरो क्षतिपूर्ति। यदि यो १250०० र 1500 3500०० किमि बीचको उडान सम्बन्धी हो भने 400०० को क्षतिपूर्ति, - युरो उचित मान्न सकिन्छ। यदि तपाइँ 3500 600०० किलोमिटर भन्दा बढी उडान गर्नुहुन्छ भने, तपाइँको क्षतिपूर्ति तीन घण्टा ढिलो भन्दा बढीको लागि amount०० को मात्रा हुन सक्छ - युरो।
अन्तमा, भर्खरै वर्णन गरिएको क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा, त्यहाँ एक यात्रुको रूपमा तपाईंको लागि अर्को महत्वपूर्ण शर्त पनि छ। वास्तवमा, तपाइँ केवल उडान क्षतिको लागि क्षतिपूर्ति को हकदार हुनुहुन्छ यदि तपाइँको उडान ढिलाइ अन्तर्गत पर्दछ भने यूरोपीयन नियमन २261१ / २००2004। यो केस हुन्छ जब तपाईंको उडान EU देशबाट प्रस्थान गर्दछ वा जब तपाईं EU देशभित्र एक यूरोपीयन एयरलाइन कम्पनीको साथ उड्नुहुन्छ।
के तपाई उडानमा ढिलाइ अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ, के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कि ढिलाइले क्षतिको लागि क्षतिपूर्तिको हकदार हुनुहुन्छ कि वा एयरलाईन विरुद्ध कुनै कारबाही लिन चाहानुहुन्छ? कृपया वकिललाई सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More। हाम्रो वकिलहरु ढिलाइ भएको क्षतिको क्षेत्रमा विशेषज्ञ छन् र तपाईलाई सल्लाह दिन खुशी छन्।
अघिल्लो पोस्ट के तपाईं भर्चुअल अफिस ठेगानामा कम्पनी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ?
अर्को पोस्ट तपाईंको निवास अनुमतिका लागि सम्बन्धविच्छेदको नतिजा